सर्बिया सरकारको अपिल ‘बच्चा जन्माउनुस, ढिला नगर्नुहोस ’
बेलग्रेड । पूर्व युगोस्लाभियाको विघटनपछि जन्मीएको देश सर्बिया जनसंख्या नबढ्नाले चिन्तित छ ।सर्बियाको सरकारले देश भित्र रहेका दम्पतीसँग अपिल गर्दै भनेको छ । ‘बच्चा जन्माउनुस, ढिला नगर्नुहोस । सरकारको ...
अमेरिका । संयूक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अन्तराष्ट्रिय आतंकवादको समस्यासँग जुध्न नयाँ रुपरेखा निर्माण गरेका छन् । शान्ति,सुरक्षा, मानवता, मानवाअधिकार र सतत विकासको क्षेत्रबीच समन्वयक...
अफ्रिकाको सबै भन्दा आतंककारी देश नाइजेरिया
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया स्थीत आर्थिक र शान्ती संस्थानद्वारा जारी रिर्पाेट अनुसार नाइजेरिया अफ्रिकाको सबैभन्दा आतंककारी मुलुक बन्न पुगेको छ । ग्लोबल आतंकबाद सुचकांक २०१८ अन्तरगत नाइजेरिया १३८ देशको स...
पाकिस्तान सरकार ‘पाप कर’ लगाउँदैं !
इस्लामावाद । पाकिस्तानी सरकारले छिट्टै ‘पाप कर ’ लगाउने घोषणा गर्दैछ । पाकिस्तानी स्वास्थ्यमन्त्री अमिर महसुदले भने, तहरिक- ए -इन्साफ सरकार देशको स्वास्थ्य बजेट ५ प्रतिशत बढाउन चाहान्छ । जसको लागि छि...
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशको बुलंदशहरमा हिंसा भड्कीएको छ । हिंसाका क्रममा एक प्रहरी इंस्पेक्टरसहित २ जनाको मृत्यु भएको छ । इंस्पेक्टर सुबोध कुमार र एकजना युवा सुमितको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ...
पेरिस । फ्रान्सको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आइतबार भएको पेरिस दङ्गा पछि एक दिनमा हुने आर्थिक नोक्सानको सर्वेक्षण गरेका छन् । पहेंलो ज्याकेट धारीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा मुलकले करोडौंको आर्थिक क्...
संसारकै मजबुत पासपोर्ट
दुवई । संयूक्त अरब इमिरेट(यूएई)को पासपोर्ट संसारकै बलियो पासपोर्ट बन्न सफल भएको छ । डिसेम्बर २०१६ मा युएईको पासपोर्ट २७ औं स्थानमा रहेकाे थियो । डिसेम्बर २०१८ को सुचीमा १ नम्बरको स्थानमा पुग्न सफल भएक...
प्रधानमन्त्री वेञ्जामीन नेतान्याहु विरुद्ध भष्ट्राचारको मुद्धा !
जेरुसलम । इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामीन नेतान्याहु विरुद्ध भष्ट्राचारको आरोपमा मुद्धा चलाउन सिफारिस गरिएकाे छ । समाचार एजेन्सी एफे के अनुसार केस ४००० को नामले चर्चित दुर संञ्चार भष्ट्राचार काण्डमा ...
अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ‘सिजफायर’
अमेरिका । विगत लामो समयदेखी चल्दै आएको अमेरिका चीन व्यापार युद्ध राष्ट्रपति ट्रम्प र सी बीच भएको सघन छलफल पछि स्थगित भएको छ । हवाइट हाउसले जनाए अनुसार चीन र अमेरिकाबीच अतिरिक्त ट्यारिफ रोक्ने सहमती भ...
अमेरिकी दुतावासमा ग्रिनेट हमला
मेक्सीकाे । मेक्सीको स्थित अमेरिकी दुतावासमा ग्रिनेट हमला गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र ट्रम्पको सुपुत्री इबांका ट्रम्प मेक्सीको पुग्नु भन्दा केही समय अघि दुतावासमा ग्रिनेट प्याँकिएको प्रहरीले...
काठमाडौं । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज एच डब्लू बुशको ९४ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति रहेका उनका छोरा जर्ज डब्लु बुसले विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको निधन भएको जानकारी दिएका छन्...
जी ४ एस तालिवानी आक्रमणमा ११ नेपाली सहित २७ घाइते
काबुल । अफगानिस्तानको काबुल स्थित अंजुमन बेसको ढोकामा कार बम पड्काउँदै भवन भित्र प्रवेश गर्ने तालिवानी विद्रोहीको प्रयासलाई ब्रिटिस सुरक्षा टीमले असफल बनाइदिएको छ । ब्रिटिस बुहराष्ट्रिय कम्पनी जी ४ ए...
पेरिस । फ्रेन्स नेशनल एसेम्बलीमा शुक्रबार भएको भोटिङमा आफ्ना बच्चालाई पिट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘शारिरीक दण्ड वा अपमान’ कानुनको भौतिक, मौखिक वा मनोबैज्ञानिक हिंसा सहित कुनै पनि प्रकारको हिंसाविना आफ्...
रुसले क्रिमियामा एस ४०० मिसाइल पठाउँदै
किभ । युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले रुससँग बढ्दै गएको पछिल्लो राजनैतिक गतिरोध पछि रुसको निन्दा र आलोचना गरेको छ । दुई दिन अघि युक्रेनी पानी जहाज सहित तीन समुन्द्री नाबिकलाई रुसले निमन्त्रणमा लिए सँगै त...
१७९ यात्रु बोकेको विमान विमानस्थलमै ठोक्कियो
स्टकहोम । नयाँ दिल्लीबाट स्वीडेनका लागि उडेकाे एयर इण्डियाको विमान विमानस्थलकै घरमा ठोक्किएको छ । १७९ यात्रु विमान भित्रै रहेको समयमा भएको उक्त दुर्घटनामा सबै यात्रु सकुशल रहेको जनाइएको छ । स्टकहो...
पाकिस्तान । पाकिस्तानको यातायात अधिकारीले देशको इतिहासमा पहिलो पटक ट्रान्सजेण्डर महिलालाई ड्राइभिङ लाइसेन्स उपलब्ध गराएको जनाएको छ । पाकिस्तानी पत्रिका डनको रिपोर्टमा बताइए अनुसार इस्लामावाद ट्राफिक प...
केमिकल प्लान्टमा भएको विस्फोटमा २२ को मृत्यु
चीन । उत्तरी चीन स्थीत एक केमिकल प्लान्टमा भएको दुर्घटनामा २२ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । बेजिङबाट करिब २ सय किलोमिटर टाढा रहेको हाबेइ सेगुआ केमिकल प्लान्टमा उक्त दुर्घटना भएको चिनियाँ अधिकारीले जनाएक...
रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइने
रूस । पछिल्ला केही दिन यता यूक्रेनमा भएका गतिविधिलाई लिएर यूरोपेली संघ (इयू) ले आगामी महिना रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने भएकाे छ । चक्रीय प्रणाली अन्तर्गत इयूको अध्यक्षता गर्नुभएका करिन नेइसलले आगामी ...
मंगलग्रहमा पुग्यो नासाको यान. अर्बौ बर्ष पुराने रहस्य खुल्ने
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको अन्तरिक्षयान मंगलग्रहमा पुगेको छ । नेपाली समय अनुसार आज बिहान पौने २ बजे अन्तरिक्षयान मंगलग्रहमा सफल अवतरण भएको हो । मंगलग्रहमा पुग्नका लागि प्रतिघण्टा २० ह...
छत्तीसगढ मुठभेडमा आठ नक्सलवादीको मृत्यु
रामपुर । भारतीय राज्य छत्तीसगढको नक्सलवादी प्रभावित सुकमा जिल्लामा प्रहरी र नक्सलपन्थी बीच भएको मुठभेडमा ८ नक्सलवादी कार्यकर्ता मारिएका छन् । राज्यको नक्सलवादी विरोधी अभियानको विशेष प्रहरी महानिर्देश...